Ny An-Trano Dingana Fifamoivoizana Lalàna Mpanolo-Tsaina - Alemaina mpisolovava an-tserasera. Ny lehibe indrindra ara-dalàna ny vavahadin-tserasera.
Ny An-Trano Dingana Fifamoivoizana Lalàna Mpanolo-Tsaina
Fa ny zavatra dia ny an-trano dingana rehetra
Na iza na iza no nandray anjara tamin'ny pitsarana dia mahafantatra fa tsy azo atao foana ny hanorim-ponenana ivelan'ny fitsarana sy tamim-pirahalahianaTsy matetika, dia ilaina, any ara-dalàna ny fizotry ny hanohy ny raharaha amin'ny alalan'ny Ny mpitsara mba hanapa-kevitra. Matetika, dia loza tamin'ny lalana fifamoivoizana no mahatonga ny lalàna ny fifandirana, ny antoko, dia, kosa, manaiky ny tsy mitovy hevitra, ary farany dia ny an-trano dingana. Ny ankamaroany dia momba ny milaza ny fahavoazana sy na ny Fanaintainana sy ny fijaliana. Aiza ianao no hahita ara-dalàna ny fitsipika sy ho toy ny an-trano dingana. Izay fitsarana mihitsy ny mahay ny fomba fanao, ary inona ny dingana ny vola lany amin'ny ny an-trano dingana. Amin'ny manaraka ny mpitari-dalana, dia nandeha ireo sy fanontaniana hafa ary namintina ny zava-dehibe sasany ny vaovao momba ny lohahevitra an-trano dingana ho anao. Miaraka amin'ny filazana ny an-trano dingana, ny fitsarana momba ny paika fa ny tapa-kevitra sy ny fampiharana ny lalàna tsy miankina ara-dalàna fitakiana. Tsy toy ny any fizotry ny raharaham-panjakana na tao amin'ny fitsarana heloka bevava, ao an-trano milaza eo anivon'ny olom-pirenena iray manohitra ny olon-tsotra iray hafa Ny foto-kevitry ny fitsarana. An-trano dingana nanomboka noho, noho izany, tsy ny azy manokana mihetsika, fa foana noho ny Fandraisana an-tanana ny antoko. Amin'ny Ankapobeny, ny roa lehibe ara-dalàna ny loharanom-baovao sivily ny fomba ny fehezan-dalàna sivily ny fomba (ho fohy, CPC) ary ny fitsarana ny lalàm-Panorenana ny lalàna (fohy: GVG). Ny fehezan-dalàna sivily ny fomba mitantana ny fomba fanao ao an-trano dingana amin'ny tranga rehetra (. Ohatra, Ny Antso, Ny Fanitsiana). Ahitana ny fitsipika momba ny mba hitsangana toy ny fitoriana dia, ahoana no porofo dia ho voangona, ary manapa-kevitra ny Endrika izay ny fitsarana.
Ankoatra izany, ny fehezan-dalàna sivily ny fomba ahitana ny fitsipika mikasika ny fomba fampiharana ny Famaizana.
Ny fitsarana momba ny lalàm-panorenana ny lalàna ahitana fitsipika momba ny rafitra sy ny sangan asa, ary koa ny andraikitry ny fitsarana. Izay fitsarana ambaratonga voalohany fahefana dia miankina, toy ny fitsipika, ny tsirairay vola eo amin'ny fifandirana eo ny raharaha. Ny ao an-toerana mahita fahefana ny lalàna fototra ao amin'ny andininy roa ambin'ny folo polo amby efa-polo fehezan-dalàna sivily ny fomba. Amin'ny Ankapobeny, ny ara-boajanahary ny Olona mety ho nanenjika ny toerana Ankapobeny fahefana, izay mifanaraka amin'ny fizarana telo ambin'ny folo ny fehezan-dalàna sivily ny fomba ny toeram-ponenana.
Ara-dalàna ny Olona (ohatra ny GmbH), na izany aza, hitory ao ny hevitry ny fizarana fito ambin'ny folo ny ZPO dia ny toerana izay manana ny seza.
Mikasika ny fanontaniana momba ny fahefana avy amin'ny fitsarana ny zava-dehibe amin'ny fifandirana, ny olana dia ny ara-dalàna, araka ny efa voalaza, ny andraikitra. Ny fifandirana hatramin'ny. Ariary dia halefa ho fampiharana ny fizarana telo amby roa-polo ny fitsarana hanao ny distrika fitsarana. Ankoatra izany, zava-dehibe ny tany, ankoatra ny zavatra hafa, mikasika ny hofan-trano fanaraha-maso ny lanja, irrespective ny fifandirana ao an-toerana ny fitsarana.
Noho ny fifandirana izay tsy voatendry ny eo an-toerana ny fitsarana, ny tany manontolo ny fitsarana. Ao Alemaina ny fehezan-dalàna sivily ny fomba manomboka amin'ny antsoina hoe Fahalalana.
Ao anatin'ny izany Ny fomba fizarana, ny fitsarana dia, aorian'ny fandraisam-peo, ny Famerenana sy ny fanombanana ny ny zava-misy rehetra mba hamoaka manan-kery ny fanapahan-kevitra. Amin'ny fifandraisana amin'ny fanekena dingana, ny antsoina hoe mpampihatra ny fitsarana.
Izany kosa, dia ny fanamafisana indrindra indrindra ny fitsarana ny fanapahan-kevitra na ny Antoko mikatona fampitahana.
Sivily ny fomba fiasa dia tompon'andraikitra foana amin'ny dingana ny vola lany. Ireo dia ahitana ny tsirairay ny fitsarana ny vola lany amin'ny ny an-trano dingana, toy izany ihany koa ny avy-of-ny fitsarana ny vola lany. Eo anivon ny farany, indrindra indrindra, ny mpisolovava ny saram dia ny vola, tsangatsangana, ary mba mahatakatra ny vidin'ny misy ilaina ny hevitry ny manam-pahaizana. Ao amin'ny fizarana ny ny an-trano dingana fitsipika dia tafiditra. Amin'ny faran'ny ny dingana ny fitsarana no mahatonga ny fanapahan-kevitra momba ny hoe iza no hitondra misahana ny vola ao amin'ny zavatra izay ampahany.
Afa-tsy rehefa ny asa dia nitondra, ny an-trano dingana
Izany fanapahan-kevitra izany dia antsoina hoe ny antsoina hoe vola lany ny fototra fanapahan-kevitra. Eo ambany ny sasany Ny toe-javatra dia afaka nandray anjara tamin'ny Dingana dingana vola fanampiana. Ny fihainoana amin'ny ny an-trano dingana dia foto-kevitra Ankapobeny dia mitovy foana ny dingana. Ireo dia toy izao manaraka izao ao amin'ny Olona, toy ny: ny fandinihana Ny vavolombelona nandre ny an-trano dingana ireo matetika indrindra porofo. Koa ny fanontaniana ny amin'ny fijoroana ho vavolombelona ny vola araka ny sasany rafitra, izay tokony nandinika ny fitsarana amin'ny fotoana rehetra. Izany dia manome Indrindra ny dingana manaraka: momba ny fanontaniana ny enta-mavesatry ny porofo ao amin'ny ny an-trano dingana, ny fanarahana fitsipika dia mihatra: toy ny fitsipika, ny antoko tsirairay dia samy mitondra ny enta-mavesatra ny porofo ho an'ireo zava-misy, ao ny zava-nitranga ny manome vahana ara-dalàna mahazatra. Midika izany fa isaky ny antoko daholo ny porofo rehetra, inona no tena ilaina. Ny fomba mety, raha ny antoko maniry, amin'ny alalan'ny fampitahana mba ho vita ny marimarina kokoa noho ny amin'ny didim-pitsarana. Ny fampitahana dia fifanekena izay ny fifandirana na fisalasalana ny antoko ny fifandraisana ara-dalàna ao ny fomba ny fiaraha-mientana ifampizarana manome dia ho foanana. Araka ny lalàna, dia normalized ao § ny Sivily fehezan-dalàna (raha fintinina dia: ny teny alemana an-trano fehezan-dalàna). Fa ny tanjon ny amicable ponenana dia afaka ny ho eo amin'ny manodidina ny an-trano dingana, ny antsoina hoe dingana mampitaha mikatona. Raha misy antoko tsy, ny fanapahan-kevitry ny fitsarana mba ho afa-po, eo ambanin'ny toe-javatra sasany, dia mety ho antsoina hoe tsara ny antso. Miaraka amin'izany, ny fanapaha-kevitry ny fitsarana dia ho voasazy. Devolutive fiantraikany dia midika fa ny olana dia ny antsoina hoe ny fitsarana ambony. Araka ny fitsaràna, ohatra, ny fitsaram-ny ray aman-dreny. Suspensive fiantraikany dia midika fa ny hery ara-dalàna ny fitsarana dia nahemotra fanapahan-kevitra.
Manohitra ny lalàna misy, eo ambanin'ny toe-javatra sasany, ny fanafody ny antso sy ny Fanitsiana.
Manohitra ny fanapahan-kevitra farany ny ohatra voalohany dia mety - eo ambanin'ny toe-javatra sasany - ny antso an-trano ho ampidirina. Amin'ny azy na araka ny lalàna sy ny zava-misy mifandraika amin'ny fitarainana azo fantarina, ary ankoatra izany, ny zava-misy vaovao sy ny porofo ao amin'ny dingana. Nisy koa ny antso, amin'ny alalan'ny fanapahan-kevitry ny fitsarana ho fanamby, ny antso ny amin'ny Fanitsiana. Miaraka aminao, na izany aza, dia afaka ny ho - amin'ny kosa ny antso - tsy ny zava-misy vaovao. Ny talohan'ny fitsarana dia nandinika ihany ny diso lalàna. Tsy misy tsy tapaka ny endriky ny fangatahana fampiatoana didy fiantsoana ny an-trano dingana. Arakaraka ny faniriana ny mpitory nanenjika isam-batan'olona, ny tsirairay avy fampiharana. Ny fangatahana ao anatin'ny vanim-potoana fandoavam-bola dia milaza, ohatra, mamolavola ny fomba hafa noho ny zava-declaratory asa.
Mpisolovava iray dia afaka manoro hevitra ianao amin'ny toe-javatra tsirairay eo amin'ny fanajana ny tena manokana ny filazana.
Rehefa tonga ny voatery logoff avy amin'ny fiara. Ity tari-dalana ianao dia hianatra ny zavatra rehetra momba ny antony mahatonga ny voatery fanakatonana ny fiara afaka mitarika, toy ny voatery logoff tapitra, na dia tsy miankina ny olona tsirairay dia azo atao, ny fiara-voatery mba mangataka fanafoanana sy ny vola lany eo ho eo. Ao ny raharaha ny lozam-piarakodia, ny Fiara madio ny fiantohana ny loza noho ny fahavoazana.
Na izany aza, toy ny Fiara madio no nanorim-ponenana simba.
Fanamarihana momba ny tatitra fe-potoana. Afaka ny ho an'ny ponenana Hianatra bebe kokoa momba ny lohahevitra. Na dia izany feo fakam-panahy: ny hevitra ara-barotra tsy ara-dalàna. Inona ny sazy tsy maintsy ho efa nampoizina, araka ny hevitra ao amin'ny fomba ara-dalàna mety ho rava, ary bebe kokoa ny lohahevitra, dia tsindrio eto. Ny sazy dia mahita afa-tsy ny ampahany iray manontolo-pivarotana dingana. Niharan-dalana mpampiasa matetika dia tsy mahalala marina izay tokony ho izany fomba fanao sy fomba fiasa mitovy. Fanazavana momba ity sy ny singa-pitantanana tsara ny fizotry azo vakiana ao ny vaovao mpitari-dalana ao amin'ny ny lohahevitra. Maro Ny Olona, ny mividy noho ny voalohany ny fiara - ohatra, ny beginners tena sahiran-tsaina, ary tsy fantatro mazava tsara hoe inona avy ireo dingana mandeha amin'ny alalan'ny alohan'ny farany kosa ny voalohany laps ny faniriana fiara. Ny mpitari-dalana manazava ny fizotry ny hividy fiara. Inona mihatra amin'ny asa nentina teo anoloan'ny fitsarana ara-panjakana. Inona no fototra araka ny lalàna. Manjaka ao amin'ny fitsarana ara-panjakana ny filaza mandidy ny adidy hamela ny tenany ho ohatra amin izany ny mpisolovava. Eto azonao atao ny mamaky bebe kokoa momba ny foto-kevitra. Ny fiara fiarovana fanofanana dia zava-dehibe roa ireo ho an'ny fiara sy an'ny mpitondra môtô mahaliana. Koa, izany dia ho professional mpamily sy ny Fiara miaraka amin'ny tranofiara dikany. Toy ny mitondra fiara fanofanana atao, ary inona no singa milalao ao saika isaky ny taranja manana anjara toerana mba hianatra ny vaovao mpitari-dalana ao amin'ny ny lohahevitra. Inona ny onitra, raha ny marina, ny loza. Ahoana no avo dia azy, ary inona ny antony ao ambadiky ny antsoina hoe vola na ny fandaniana. Ity mpitari-dalana afaka mahazo vaovao mahasoa manodidina ny lohahevitra momba ny onitra.
Bundestag, misahana ny ara-dalàna ny Raharaha sy ny fiarovana ny mpanjifa
Naon barudak pengacara sabenerna teu